ရန်ကုန်မြို့၌Waterzonic Myanmar 2019 ပွဲတော်ပြုလုပ်မည်
ဒဂုံဝေလင်း Friday, 27 September 2019
Brave Entertainment မှ ဦးစီးပြီးနှစ်စဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် Waterzonic Myanmar EDM ပွဲတော်ကြီးကို ယခုနှစ်အောက်တို ဘာ ၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏရှိ The One Entertainment Park ၌စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည်ဟု သိရသည်။
''ဒီပွဲကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေ က ထက်ပိုပြီးထူးခြားတာတွေပါ လာပါတယ်။ အခုပြည်က နာမည် ကြီး Dj ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့Greatest Dubstep Artst တစ်ယောက် ဖြစ်သူကနေဒါနိုင်ငံသား Excision ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် တစ်ဖွဲ့ကတော့Smash The House Record Label ရဲ့ ထိပ်တန်းDuo Dj Producer ဖြစ် တဲ့ Wolfpack ပါ။ နောက်တစ် ယောက်ကတော့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သား Noisecontroller ပါ သူက တော့Hardstyle Legendary Dj/ Producerဏမသိကခနမ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါ တယ်။ နောက်တစ်ဦးကတော့ Ps-ytrance သံစဉ်တွေကို နားထောင် စီးမျောရင်းရေတွေကြားမှာ ကခုန်ရ တဲ့ ဖီလင်ကို ခံစားရအောင်ဖန်တီး ပေးမယ့် နာမည်ကြီးDj Producer တွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Zanon ပါ။ သူတို့တွေရဲ့ မြူြး<ွကတဲ့သံစဉ်တွေ ကိုခံစားရမှာပါ။ အားလုံးကလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဖျော်ဖြေ နေတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ'' ဟု ပွဲဖြစ် မြောက်ရေးတာဝန်ရှိသူ ကိုစိုးမိုး ကပြောသည်။
အဆိုပါပွဲတော်သည် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိပြီဖြစ်ပြီးပွဲတော် တွင် Aquapolis (ရေအောက် ကမ္ဘာ) ပုံစံမျိုးတင်ဆက်မှုများကို တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ပြည်၏ ဒုတိယသင်္ကြန် ပွဲတော် တစ်ခုပမာကျင်းပမည်ဟု သိရ သည်။ ယင်းပွဲကို ကြည့်ရှိလိုသူ များအနေဖြင့် လက်မှတ်များကိုWaterzonic Page တွင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းများ အနေဖြင့် Pre - Order Ga 40000/ Early Bird Ga 45000 ဖြင့် လည်း ကောင်း၊ Going to beacheaper group pack?Group လိုက်အတွက် အဖွဲ့အထူး အစီအစဉ်အဖြစ် ပုံမှန်GA Ticket ငါးစောင်၊ ၂၂၅ဝဝဝMMK Group Pack နှင့်ဝယ် လျှင်-၂ဝဝဝဝဝMMK/ Save - -၂ဝဝဝဝ(MMK)ပုံမုန်GA Tic-ket သုံးစောင်၊ ၁၃၅ဝဝဝMMK/ Group Pack နှင့် ဝယ်လျှင် ၁၂၅ဝဝဝ၊MMK/ Save - (10000 MMK)/Group Pack Tickets Only Available At များကိုJan Jan Jan Japanese Ramen 3rd Floorç Myanmar Plaza. 09440440445? Myan-mar Raver Gyi EDM Ticketing Service 09254999254 ၊ED- M Festivals Myanmar Online Ticketing Service 099600 90078? 09977200119သို့ ဆက် သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။